नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : नेपाल लाई अहिले चाहिएको यस्तै "आम आद्मी" हो । कृपया यो अन्तर्वार्ता हेर्नुस् र खोज्न शुरु गर्नुस् अरबिन्द केजरिवाल ! जसले दिल्लीमा भर्खरै सम्पन्न चुनावमा कङ्रेस र बिजेपीको पनि सातो काढे !
नेपाल लाई अहिले चाहिएको यस्तै "आम आद्मी" हो । कृपया यो अन्तर्वार्ता हेर्नुस् र खोज्न शुरु गर्नुस् अरबिन्द केजरिवाल ! जसले दिल्लीमा भर्खरै सम्पन्न चुनावमा कङ्रेस र बिजेपीको पनि सातो काढे !
Posted by www.Nepalmother.com at 2:03 PM